Real Madrid oo go’aamisay qiimaha ay Manchester City kaga iibineyso Francisco Isco – Gool FM
(Real Madrid) 18 Dis 2018. Real Madrid ayaa wararku sheegayaan inay ogolaatay inay ka iibiso xiddigeeda khadka dhexe Francisco Isco dhigeeda Manchester City, lakiin waxay ku dalbaneysaa qarashaad badan.
Francisco Isco ayaan ku gudi jirin waayihiisa ugu fiican ee kooxda Real Madrid, waxaase intaas sii dheer inuu khilaaf xoogan kala dhexeeyo jamaahiirta ku sugan garoonka Santiago Bernabéu.
Wargeyska “Daily Telegraph” ee dalka England ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in kooxda Manchester City ay qorsheyneyso in Francisco Isco ay kasoo dajiso Etihad Stadium suuqa furmi doono bisha janaayo ee soo aadan.
Pep Guardiola ayaa qeyb kaga dhigay Francisco Isco liiska gaaban ee ciyaartoyda uu ka xiiseenayo suuqa furmi doono bisha Janaayo ee soo aadan.
Heshiiska uu Francisco Isco ku joogo kooxda Real Madrid wuxuu dhacayaa 2022, waxaana suuragal ah in uu ka dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabéu, sababa la xiriira inuusan ku qanacsaneen xaalada uu haatan kaga sugan yahay.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Manchester City ay diyaar la tahay bixinta aduun dhan 80 milyan oo ginni si ay gacanta ugu dhigto saxiixo Isco, laakiin Real Madrid ayaa diiday inay aqbasho dalab kasta ee ka yar € 100 milyan.